Somali youth ....
Kulamada laga ciyaari doono Koobka Afrika iyo Horyaallada waaweyn ee Yurub iyo Waqtiyadooda Kulamo ka tirsan koobka Qaramada qaaradda Afrika oo shalay lagu daah furay Dalka Gabon ayaa Caawa ka dhacaya gobollada dalkaas. Read More...
Cayaaraha Premier League ee toddobaadka soo aadan oo dib u dhac uu ku imaanayo Maalmaha bilowga toddobaadka soo aadan ayaa la filayaa tiro kamid ah kulamada horyaalka Premier League in aan la cayaarin, cimilada oo liidata awgeed. Read More...
Shirwaynihii 7-aad ee Dooraashada GOS oo Muqdisho ka dhacay, Xilli lagu doortay Hogaanka afarta sano Waxaa Hoteelka Shaamoow ee magaalada Muqdisho ka dhacay Shiweynihii 7-aad Doorashada ee Guddiga Olombikada Soomaaliyeed kasoo lagu dooranayay hogaanka Read More...
Dekedda oo ku guuleysatay horyaalka kubbadda Gacanta Soomaaliya Naadia Kubadda Gacanta Dekedda ayaa ku guuleystay horyaalka kubadda Gacanta Wiilasha 2016-17. Read More...
Waxaa Axaddii aynu soo gudubnay ku soo gabagaboobay garoonka Banaadir ee magaalada Mogadishu tartankii kubadda cagta ee Jeneral Daa’uud oo ah tartan fac wayn isla markaana ka mid ah saddexda tartan ee ugu xiisaha iyo xamaasadda badan tartamada kubadda cagta dalkeena.
Naadiga Kubada cagta LLPP Jeenyo ayaa ku guuleysatay koobka Jeneraal Daa'uud 2016 kadib markii ay 4-1rogoorayaal gaaraya uga adkaatay kooxda ay xafiltamaan ee BanaadirSC. Read More...
Waraysi xiddigihii Cantar Jeenyo iyo M Ismaaciil.
Waraysi Orodyahan/Macalin C/Saaq Diirshe. SNTV
Barnaamijka cayaaraha SNTV Wiish v Sayga
Int League Tables